Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday! | Dhacdo.com
Home Maqaalo Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday!
Qormadan gaaban ayaan ugu talagalay in aan aragtideyda qormo kaga waramo Alifleeyda sallafay ee ku hawooda siyaasad u baahan deganaan khibradeed.
Macna ahaan aniga igama ahan in aan ku liidaayo shakhsiyaad hammi u leh siyaasadda badweynta ah ee dalkeena ka jirta.
Waxaan in badan indhahaygu qabtaan dhallinyaro wax dhaliisha aragti ahaan, balse aynaan haysan hadaf ee wax ku dhaliilaan.
Waxaa in badan ku arkaa barraha bulshada dhaliilo ku qotoma aragtiyo diidmo iyo mid aan diidmo ahayn.
Dulucda ujeedka :–
Waxaa i soo maray walaalo aan ka soo wada jeedno deegaan aan u wada dhalannay, kana mida dadka aadka uga hadla barraha bulshada.
Waxaan marar badan ka wada sheekeysanay marxaladaha iyo horumarrada aan la rabno deegaanadeena iyo sida aan u jeclaan lahaa in aan uga midowno horumarinta dadkeena.
Markasta oo aan gaarno wax ay dadkeenu u baahnaayeen misena ay iyaga aad ula xumaato, iyagoo u sababeeya xumaan ay badanaa ladoonaan shaakhdiyaadka horseedka u ah hiigsiga hadafyada aan gaarno badanaa.
Waxaan badanaa isku dayi jiray in aan sharraxaad ka siiyo waxa qabsoomay iyo halka ay wax noo marayaan, hase ahaatee taa bedelkeeda waxay barraha bulshada noogu soo jawaabaan kuwa dadkeena iyo deegaanadeenuba aanan u wanaagsanayn.
Marxaladaha deegaanada aan kas oo jeedno waxay u yaqaanaan magacyo shakhsiyadeed, iyagoo bulshada u dareensiiya in wax kasta oo wax qabad ah ay aad u sii hooseyso.
Dhinacyadan ayaan arkaa in ay aad u buun buuniyaan kolka ay qaraxyadu dhacaan, misena uu Webiga Shabelle bilaabo in uu ku fataho deegaanadeena. Eedeymaha ay soo jeediyaana maaha kuwa ay wax ku dhisayaan ee waa kuwo ay ku burburinayaan.
Marka aad milicsato sida ay uga aradan yihiin siyaasad hufan iyo sida ay isugu haystaan khubaro dhanka siyaasadda ah ayaan ugu magac-daray (Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday!).
La-soco qaybta labaad
Hassan Abdulkhader Mudey